Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa amar culus ku dul-dhigay dhammaan hay’adaha kala duwan ee dowladdu ay ka kooban tahay.
Siciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu wareegtadiisa ku amray in dhammaan hay’adaha dowladdu si buuxda u adeegsadaan isticmaalka Afkeena hooyo ee Soomaaliga oo sanadihii ugu dambeeyey ku sii yaraanayey xarumaha dowladda.
Waxaa kale oo uu madadxweynuhu ku amray dhammaan hay’adaha madaxa banaan inay isticmaalaan afka Soomaaliga ciiddii fulin waydana lagu qaadi doono shuruucda dalka iyadoo la raacayo qodobada ku xusan xeerka Dhowrista afka ee Barlamaanku meel mariyeen.
Dabcan, reer Puntland gobnimadooda ayaa kadhex birbirqaysa culayska weyn ee ay Soomalinimada iska saareen iyo galkacalka kasha-iyo-laabta ah ee ay Soomaalinimada uqabaan.
Marka ay noqoto masalada luqaddeena, arrintu masahlana xaqiiqdii oo ma aha mid awaamiir guud oo keliya lagu dabbaqi karo. Waa masalo mudan in dhanka suugaanta lagasoo abbaaro oo ay waaxda tacliintuna dowrka uguweyn kaciyaarto.
Waa hiddo uu waajibku yahay in shacabka ladhadhansiiyo oo ay iskooda umacaansadaan oo qiimaha iyo qaayaha ay mudantahayna guddoonsiiyaan. Tallaabada uguhorreysa ee in hab goshiyeed looqaado ubaahan waa Af-Haneedka oo dib loosallaxo maadaama ay haatan adkaatay in labadiisa fooc ee Hadlanaha iyo Hawraartanka iyo foocyada ay ukalabaxaan lakalagarto oo lakalasaaro.
Waxay masiibo kajirtaa inay wasaaradaha dawladdu iyo saxaafaddu xataa aad uguliitaan aqoonta iyo adeegsiga Af-Haneedkeena saxda ah, waaxda tacliintuna aanay wax ihtimaam ahba siinin marka ay baristiisa noqoto.
Geela duqdiisu durdurisay, aarankiisa maxaad mooddaa?: kuwii bulshada hoggaaminayay ee uu waajibku ahaa in Af-Haneedka lagagadaydo haddii ay iyagiiba jiireen, bulshada kale maxaa lagafilayaa?
Arrimahan bulshada aasaaskeeda ah, sida luqadda, awaamir dawladeed oo keliya umabaahna ee waxaa socodsiiya oo dhaqangeliya talameello sugan iyo hanti loogutalagalay; dawladdu iyo saxaafadduna ay horseed iyo tusaale fiican uyihiin.
dowladah aduunka kuli waxeey isticmaal luqado ajnebya khaastan luqada ingriska iyo carabiga luqad vsomali waxa laga barta qabil asaagan way kaa reebin qahira arada jamacda dhigta waa reer woqoyin iyo reer puntland ma aqaan meshey afa carabiga ka barteen xamar arada ka timi afkii waa laqab sanwaayee badowyo dadaka gadaal ha ucelin
Waxwalba ma gudoomiye ama madaxwaynaha Puntland sida loo badan yahay in loogo yeero,dhabti waa ( Governor).
Waxaa la yaab leh,in howshii oo dhan la yiri,waa in uu maamulo Deni.
Arintan iyo kuwa kale oo badan,waxaa fulinteeda leh hayado kale,waana mida curyaamisay habka kala sareeye ee maamul goboleedka Puntland.
Waa in maamulko noqdaa mid hay’adaha ay u kala xilsaaranyihiin,oo aan waxwalba madaxtooyada kafa maamulin.